UDube oyindodana kaMato Madlala usebhekwe ekufukuleni i-Arrows
July 24, 2021 Impempe.com
Kulindeleke ukuthi ikhule kule sizini indodana kasihlalo weGolden Arrows, uLungelo Dube, abe ngomunye wabadlali abaqala imidlalo. UDube ukhushulelwe eqenjini elikhulu nngo-2018 ngemuva kokuba senkulisa yeqembu isikhathi eside.
Wayeseqenjini le-Arrows leMDC elawina iDiski Challenge ngo-2016. Umthombo osondelene naleli qembu uthe uDube usetsheliwe ukuthi sekuyisikhathi sokuthi aqale ebonakale eqenjini.
Lokhu kungenxa yokuthi iqembu lihanjelwe abadlali abamqoka kanti uDube nguyena okulindeleke avale isikhala sikaSeth Parusnath odayiselwe iSuperSport United.
“Yisizini yakhe le. Ubevele esesondele nangesizini edlule ekutheni angene eqenjini eliqala imidlalo. Uyazimisela ejimini futhi kunzima ukubona ukuthi umfana kamphathi ngoba akaziphakamisi.
“Ufaka igeja phansi njengabo bonke abanye abadlali futhi bathi ukufanele ukunikwa ithuba manje. Ngiyacabanga kuba nzima kuye ngoba uma engavele afakwe nje, kuzothiwa uyenzelelwa ngoba ezalwa wumphathi weqembu.
“Kodwa manje nabanye abadlali bayabona ukuthi kumfanele ukudlala, ikakhulukazi njengoba kuhambe uParusnath abebebanga naye indawo,” kusho lo mthombo.
FUNDA NALA: IChiefs kulindeleke isayine u-Alexander ofuna ukuphinde adlale ngaphansi kukaBaxter
UDube, oneminyaka engu-26, ababaningi abebazi ukuthi uzalwa ngusihlalo weqembu. Uma egcina edlala, neRoyal AM ingena kwiDStv Premiership, kuzoba nguyena no-Andile Mpisane abadlali abazalwa ngosihlalo bamaqembu.
KwiGladAfrica Championship kukhona uMatsilele Junior oyindodana yokugcina kaJomo Sono odlala eqenjini likayise iJomo Cosmos.
Previous Previous post: ISharks isiqhwakele kwilogi yeCurrie Cup
Next Next post: UBavuma ubashiye bevuma abe-Ireland ebukisa ngabo koweT20